Maxaa kudhaca Bentley iyo adeegyada WMS - Geofumed
Juunyo, 2008 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Maalmo maalmo ka hor oo ah Forum Cartesia Tomás ayaa wax ka waydiiyay Microstation iyo suurtagalnimada inay isku xirmaan adeegyada khariidada (WMS)
Qeybta Bentley ugu yaraan waxaa jira saddex codsi oo ku jira bogga OGC:
Kani waa codsi macmiil oo loogu talagalay adeegga daabacaadda, kaas oo akhriya xogta mashruuca Geographics ama ka yimid Shema Bentley Map oo u diraya adeeg ahaan. Waxa kale oo aad ku xiran kartaa adeegyada ESRI oo leh codsi la yiraahdo Connector GIS iyo soo saarista lakabyada MXD.
Muddo ka dib waxa ay la shaqaynaysay mashiinada Java, laga bilaabo 2004 waxay sameeyeen codsigooda ActiveX oo loo yaqaan VPR (View, Print, Redline)
Sida laga soo xigtay waxa lagu daabacay bogga OGC, Geo Web Publisher ayaa fuliyay heerarka WMS 1.1.1
Tani waa waxa loo yaqaan Microstation Geographics, waxayna hirgelisay heerarka GML 2.1.2, GML 3.1.1, GMLsf 1.0.0, WFS (T) 1.0
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah wada sheekeysiga waxaan la lahaa Keith Raymond, Baltimore, Microstation ma laha codsiyada noocan oo kale ah (si rasmi ah loo diiwaangeliyo) iyo in lagu hirgelin doono Microstation 8.11 loo yaqaan Athens.
Xaqiiq ahaan, heerka WMS 1.1.1 wuxuu ka muuqanayaa bogga OGC.
In hab xasaasi ah loo diiwaangeliyo waa la samayn karaa inkastoo aan heerarka aan ansaxin OGC ... waxa aan jeclahay in aan tan ku ogaado forum AutoDesk
1 Maareeyaha Raster
Tani waxay ku jirtaa Maamulaha Raster, ee "goobaha / Sawirrada Sawirrada"
Iyadoo ay ku jiraan guddi, "ku dar" waa la doortaa, adeegana waa lagu daraa, bixinta magac iyo magac.
Markaas waxaa la keydiyaa "file / save" iyo habkan faylka qaabka leh kordhin .cfg waa la keydiyaa, taas oo ah mid ka mid ah adeegyada keena.
Tani waa ikhtiyaarka lagu heli karo adeegyada sawirrada la abuuray Geo Web Publisher, nooca pss oo noqon kara vector ama raster.
Si aad u tirtirto, "faylka / lifaaqa" ayaa la sameeyaa, ka dibna qaybaha hore (V8.5) liis ay ku qoran yihiin alias. XM ayaa ka muuqda kore, oo ku xigta meelaha ugu cadcad, tani waxay muujinaysaa adeegyada la heli karo.
2 Abuuritaanka faylka xml
Sidaa darteed waa inaad sameysid faylka faylka ah, oo la sii dheereynayo, waxaadna ku dhejisaa lambarka sida ku qoran heerarka caadiga ah, tusaale ahaan Microsoft Terraserver, tani waxay noqon kartaa lambarka:
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" istaandoon = "haa"?>
<HEIGHT> 500 </ HEER>>
Kadibna waxaa loo yaqaan 'raster' (file / attach), doorashada nooca nooca faylka ah
Iska ilaali, tan waxay ku shaqeysaa Microstation 8.9 ama ka sareeya, taas oo tusinaysa inaysan u baahnayn Bentley Map. Waa inay isku dayaan, sababtoo ah markay soo dhowaato waxay dareemeysaa inay u dhowdahay sida sawirku ahaa degaan ... wow!
Keith, waxaad igu beenisay 🙂
Post Previous«Previous Sidee Kooxda Autodesk Design Team
Post Next Sida loo sameeyo IMS la Manifold GISNext »
15 Jawaab ayaa ku saabsan "Maxaa kudhaca Bentley iyo adeegyada WMS?"
Haa, waxaan ku safray galbeedka ... waxaa jira roobab badan
Ma aanan arkin isbeddelada boggaaga, Waxaan doonayaa inaan fiiriyo markaan ku laabto xiriir la aqbali karo ... cyber-ka waa masiibo
Ay mawjadaheedu user72, aad ejeejeje iyo sida waa inaad ???? regresastes Kuwan porrazos biyaha iyo aad jidka, warbixin vooo, aad is ogow in ay arkaan maalintaas hadda waxaan arki we'm jejeje hadda more duldhacay ... markii aan hadda waxaa travesiando agagaarka halkan jjeejej waxa aan hore u xirtaan cusub ee aad soo wici kartaa ??? http://www.ecohonduras.net wuxuu daryeelaa naftiisa ...
Hey in Arost sida ... Waxaan u socdaa
Waa maxay hirarka aad? waad lumisay, waan ku aragnaa ...
Waa dhibaato, markii aan ahaa J version waxay sheegeen in wax walba ay qaadan doonaan V8, ka dibna XM, ka dibna Mozart, hadda in Athens ...
Guud ahaan waxaa jira had iyo jeer wax ka hadhay.
Iyadoo sida ugu fudud ee loo yaqaan AutoCAD Civil (Khariidad) ay isku xiraan WMS 🙄
Anigu ma fahmi karo sida Bentley ugu dambeysay ee lagu fuliyo adeegyada OGC.
Xaq ayaad tahay, taasi waxay ka timid 8 Version, waana adeegyo ay abuureen daabacaadaha geoweb (PSS) oo noqon kara sawirro ama vectors.
Xaqiiqdu waxay tahay in noocyadii ka horreeyay XM, markii la samaynayay "lifaaq", meesha ay ku taal jihooyinka asalka ah (C: D: E :), magacyada loo soocay server-yada sawirka la abuuray ayaa u muuqda.
XM version waxay u muuqataa astaan ​​kor ku xusan, labada qof ee ugu cadcad, isla markaana sameeya.
Ugu danbeyntii, taasi waa adeegyo daabacaad ah oo la abuuray Geo Web Publisher ... ama mashruuca Project Wise
iyo waxa la bedelayo XM ... ii sheeg in aan iska diidayo in aan ka guuro Geographics ilaa Bentley Map.
... illaa iyo markii aan tegay BU, iyo markii aan ka hadlayay Juquraafi ah ayaan ka tagay sidii aan u sheegay daaqadaha 95
Waxaan ka helay mawduuc la xidhiidha golaha Bentley, laakiin wax badan kuma darin, waana arrin qosol leh:
Waxaan isku dayay siyaabo kala duwan, mana arko sida loo sameeyo. Waxaan u maleynayaa in doorashadu ay la shaqayn karto Microstation 8.1. oo waxaan doorbidaa nuqulkan.
hehe, ma aanan ogeyn waxa la sameeyo.
Waan ogaan doonaa oo waan kuu sheegi doonaa
Hi G!, Haddii aad raacdo nidaamka «1. Iyada oo loo marayo Maareyaha Raster », oo qeexaya magac u gaar ah muuqaal server, oo ikhtiyaarkee ayaa markaa ku xirmay?
Microstation 8.9 waa Microstation XM?